Manni murtii Federaala Itiyoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahimad irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf haleellaa Waxabajjii 16 raawwatan kan ittiin jedhe namoota shan yakka shororkeessummaan himatee jira.
Abbaan alangaa Fedeeraalaa har’a mana murtii Federaalaa dhaddacha Lidetaa 19ffaaf iyyannaa himannaa dhiyeesseen Geetuu Girmaa Tolosaa, Birhaanuu Jaafaar Hulettuu, Xilhaahuun Geetaachoo Gonfaa, Baahiruu Tolaa Toleeraa fi Dassaalenya Tesfaayee Habtaamuu kanneen jedhaman irratti yakka shorokeessummaa raawwatan jechuun himannaa dhiyeessee jira.
Himannaan sun akka jedhutti himatamtoonni kun yakka raawwatame sana keessatti guutummaan himaachuu dhaan muummicha ministeeraa Abiy irraan miidhaa dhaqqabsiisu akkasumas mootummaan jijjiiramaa Dr. Abiyyiin hoogganamu jiraachuu hin qabu, maqaa uummataan kaayyoo ofii garee geggeessatuu dha, kanaaf ajjeefamuu qaba jechuun murtii irra ga’uu isaanii iyyanni abbaa alangaa tarreessee jira .
Himatamtoonni kun karaa michoota isaanii to’annaa jala hin oolintiin halellaan sun raawwatamuun kan irra jiraatu maqaa Adda bilisummaa Oromoon kanneen sosso’aniin yoo ta’e walii galuu isaanii iyyannaan sun ibseera.
Kunis muummichi ministeeraa Abiy fudhatama kan hin qabaannee fi uummata Oromoo birattis fudhatama akka isaan hin qabaanne gochuuf kan akeekame ta’uu ibsa iyyati sun.
Himtamtoonni kun garee dhaan qindaa’uu dhaan karaa michoota isaanii ammaaf to’annaa jala hin oolin-tiin ajaja itti kennameen muummicha ministeeraa Abiy irraan miidhaa geessisuu akkasumas hiriira sana bittinneessuu yaaduu dhaan haleellaa boombii raawwachuu dhaan lubbuu namaa fi qaama namaa irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaaniin yakka shorokeessummaa raawwataniin himatamaniiru jedha iyyannaan abbaa alangaa. Himannaa irratti dhiyaate akka of irraa ittisaniif manni murtichaa Onkoloolessa 2 bara 2011tti beellama ka biro kennee jira.
Dhaddachichi guyyaa har’aaf dhimmoonni beellama qabeef ka biroon dhimma prezidaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii kan Abdi Muhamed Umarii fi kanneen isaan waliin to’annaa jala jiranii yoo ta’u poolisiin adeemsa qorannaa geggeessuu ibsee jira. Akkuma kanaan dhuga ba’uumsa namoota 41 kan dhaggeeffate yoo ta’u reeffi namoota 18 hospitaalatti ergamee ba’iin isaa eegamaa ka jiru ta’uu beeksisee jira jedha Meleskachoo Ammahaa Finfinneerraa.